Inona ny olan'ny nitrogen, maninona no mitaraina ny tantsaha ary nahoana ny fihenan'ny hafainganam-pandeha? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 7 Novambra 2019	• 12 Comments
Toa misy ny fikapohana mafy tokoa izany! Mila mampihena azota ny tantsaha rehetra. Io teny hoe 'azota' io dia efa manana ny teny hoe 'mijaly' ao aminy ary noho izany dia mahatonga ny olona salanisan'ny olona eny an-dalambe hihevitra fa miatrika zavatra iray isika rehetra. Mety ho maro koa no mifandray amin'ny CO2 ary tsy fantatra ny fahasamihafana. Ny Nitrogen dia fototra amin'ny singa fototra amin'ny natiora. Ny teny hoe 'azota' dia midika amina atiny izay tsy mety hitranga amin'ny natiora ihany no endrika mifatotra (ho toy ny molaly). Izany no antony maha-mpamboly anao, tsy afaka mampihena azota. Azonao atao, ohatra, ny mampihena amony. Ammonia NH₃ dia azo refesina ary hita, ohatra, ao amin'ny famokarana ombivavy. Ny fanirian'ny fanjakana hanao zavatra amin'ny fampihenana ny azota dia mazava fa safidin'ny NLP (Neuro Linguistic Programming) hilalao amin'ny vahoaka amin'ny ambaratonga ambany. Ny fihenan'ny nitrogen dia tsy midika na inona na inona mihitsy. Inona no hampihena anao? entona azota, ammoniac of iray amin'ireo akora maro hafa izay misy ny singa azota?
Fantatrao tsara angamba ny azota azota ao anatin'io entana io ambany tsindry ao anaty tavoahangy iray ary mila arotsahanao miaraka amin'ny fonon-tanana matevina ianao (na toy ny ao amina sary anaty tavoahangy misy alikaola), satria raha tsy izany dia mandrehitra entona azota ny nitrogen (N2). Izany no ampiasaina ohatra hanesorana ireo tolotra. Vantany vao mivoaka ny tavoahangy avo lenta ny azota dia manomboka mikotrona sy mihena. Manana mari-pana mangotraka -195,8 ° C ary io no mari-pana amin'ny fitrandrahana azota. Tena mangatsiaka be ny entona nitrika ary manomboka mihena amin'ny rivotra. Ny fitazonana azy io eo ambany fanerena mafy ao anaty tavoahangy vy matevina dia mahatonga azy io tsy hikoriana. Lalàna ara-batana izany.
Efa haintsika fa tokony hampihena ny CO2. Ny CO2 dia tsy misy ifandraisany amin'ny entona azota (N2). Ny CO2 dia midika hoe ny dioksida. Ka izay no voalamina an'io teny io: ny di-oxide dia miangona oxygen 2x. Atoma karbonika misy atody oksizenina roa mifamatotra aminy. Ny gazy karbonika dia vokarina amin'ny alàlan'ny solika mandrehitra misy karbon. Ny gazy sy ny solika ary ny solika dia misy atody karbonina daholo. Ny molekiolan'ny solika no vokarina, ankoatry ny zavatra hafa, ny ataoma karbonika ary, rehefa may amin'ny rivotra (oxygen, dia O2 gas), ny CO2 dia noforonina miaraka amin'ny famonoana feno ary ny karbonika monoksida (CO) dia mety hipoitra miaraka amin'ny famonoana tsy feno. Ity farany indraindray dia nitranga tamin'ny mpandro entona tao anaty trano iray, ka niteraka fihomiana. Any ianao dia mety hahita ny fifandraisan'ny vazivazy eo anelanelan'ny nitrogen sy CO2. Matetika sy amin'ny tontolo tena izy, tsy misy ifandraisany mihitsy ny roa tonta.
Raha voatery mampihena azota ny tantsaha dia tsy maintsy ahena ny zavatra izay tsy voafaritra mazava akory. Izany dia satria tsy mamokatra entona azota ny tantsaha. Ny entona nitrika dia ny entona madio tena mahazatra ary mandrafitra ny 78,1% amin'ny fitambaran'ny habakabaka. Mariho fa ny atomo iray dia tsy hita afa-tsy amin'ny natiora mifandray amin'ny atom hafa. Mitovy amin'ny atiny oksizenina (O) raha tsy ohatra, ny gazy oksizenina (O2) na amin'ny rano mitranga (H2O). Ny sômnôlômazika mitohy dia mifanakalo tsy tapaka amin'ny habakabaka sy zavamananaina. Ny nitrogén dia tsy maintsy aroso aloha na "raikitra" ho endrika azo ampiasaina amin'ny zavamaniry, matetika amonia. Ammonia dia vokarin'ny tantsaha (farafaharatsiny ny ombiny). Ammonia dia ilaina ary ilaina ho an'ny zavamaniry, ka izany no mahatonga ny tantsaha manaparitaka ny zezika amin'ny taniny.
Rehefa mitrandraka zavamaniry ny amony, dia ampiasaina manelingelina proteinina. Ireo zavamaniry ireo dia avy eo nohodidin'ireo biby izay mampiasa ny sôbôlôbikina amin'ny alàlan'ny synthesize ny proteinina azy manokana ary ny fako amina azon'ny nitrogen (ammonia). Farany, ireo zavamananaina ireo dia maty sy mihalevona, mandalo ny fitrandrahana bakteria sy ny tontolo iainana, mamoaka ny entona azota azota (N2) any amin'ny habakabaka. Kitsa mahasoa sy ilaina mahasoa.
Tahaka ny CO2, dia tsy misy zavatra manapoizina na mampidi-doza momba ny entona azota. Raha ny marina, ny entona azota dia entona 'entona' ary ny voajanahary dia tsy mirona hiditra amina simika miaraka amin'ny zavatra hafa. Izy io dia tsy mampidi-doza, tsy misy poizina, tsy misy fofona ary mamofona azy mandritra ny andro; sahala amin'ny oxygen. Izany oxygen izay vokarin'ny hazo indray noho ny fidiran'ny CO2. Samy entona CO2 sy gazy azotazy izao ary tsara ny entona entona ary ny politika ankehitriny (sy ny vondrona mpikatroka) dia milaza fa mampidi-doza izy ireo. Izany dia satria ny governemanta amin'ny sehatra manerantany dia nampandefitra ireo mpahay siansa mba hampahazoana ny fitokisana ilay tantara, na dia tsy misy aza ny fanazavana momba ny biolojika, simika na vatana. Ny tatitra izay mampiseho fa misy CO2 betsaka kokoa mandritra ny vanim-potoana mafana kokoa eto ambonin'ny tany, dia mampiseho fa vokatry ny hetsika solar ny CO2 fa tsy ny antony. Izahay dia vavolombelon'ny majika siantifika mba hampiditra rafitra sy hetra manerantany izay rafitra misy ahafahan'ny tsirairay manara-maso ny fandaniana (ka vola vola blockchain).
Hatramin'ny 2015, ny mpiompy dia nitazona ny programa amin'ny AP (Programme d’approomoire). Hitantsika ny fihetsiketsehana tato anatin'ny herinandro vitsivitsy noho ny fampandehanana ny fepetra takiana na sarotra ampiharina, izay mitarika amin'ny tantsaha mpamboly. Ny zava-misy izay nandanian'i Mark Rutte iray andro omaly nihaino ireo tantsaha (miresaka volon'ondry ary tsy manao na inona na inona) dia mitovy amin'ny fitrandrahana entona Groningen sy ny horohoron-tany vokatr'izany: isaky ny avy eo dia misy mpanao politika mitsidika ny asany. ary avelao ny olona manapoka ny setroka. Rutte dia afaka manatona ny fivorian'ny tantsaha am-pahatokiana, satria fantany fa ny fanjakana holande dia efa nanolo-tena nandritra ny taona maro tao anaty tambajotra iray pawns amin'ny asa rehetra; tambajotran'i Inoffizieller Mitarbeiter ho fehezin'ny mpanohitra fehezin'ny faritra rehetra ao amin'ny fiaraha-monina. Amin'ny maha mpilalao azy afaka miantso ny tenany ho 'praiminisitra', tsy tokony hatahotra ny hanafika izy, satria mety ho eo amin'ity vondrona ity ihany koa ireo tantsaha izay avela amin'ny fahantrana rehetra ary mety hangina ihany izy ireo.
Satria tsy afaka mandrefy famoanana azota ianao, raha tsy misy famaritana mazava momba ny hoe iza no atao hoe azota, dia manana olana ianao. Ohatra, mamoaka entona azota ve ny omby iray rehefa mifanjevo? Tsia, misy ny angovo azota ao anaty urine sy any an-doha, fa ny omby tsy mamoaka entona azota. Ny entona nitrika dia ampiasain'ny tantsaha indraindray, ohatra, mba hisorohana ny fambolena ahitra na hitahiry voankazo, fa tsy dia miteny firy ary ankoatr'izay, ny entona azota dia tsy manimba ary entona entona. Ny mpamboly dia voatery nahazo fitaovana kajy, izay noeritreretin'ny fanjakana ho azy ireo izay mahatonga ny fandotoana azota. Rehefa farany dia hita fa misy izany ammoniac ary noho izany ho an'ny halatra sy ny urine. azota mijanona ho teny voafidy noho ny antony fampielezankevitra sy ho an'ny programa subliminal "fa mahomby ianao". Fa maninona no tsy izy fandotoana amonia voatonona ary haheno foana ve ilay anarana mampahatsiaro ny fahantrana isika? Araka ny nanazava hoe: izany no antsoinay hoe 'subliminal programming'.
Ny teti-bola farany nataon'ny fikambanana The Hague dia tsy maintsy ahena ny haingam-pandeha farany amin'ny lalana. Ary avy eo nisy zavatra hafa momba ny fananganana? Mbola azonao ihany ve? Raha ny fahitana azy dia tokony ho vitsy ny mpamboly, satria te ho afaka hanorina trano sy fotodrafitrasa bebe kokoa isika, ary noho izany dia tsy maintsy ahena ny hafainganam-pandeha eny an-dàlana, satria ny fanjakana dia afaka mandany vola amina miliara fanampiny mihoatra ny onitra fitohanana. Ny lojika rehetra dia tsy eo amin'ny resaka rehetra ary toa izany no tanjona. Tsy misy afa-tsy amin'ny alàlan'ny fahatsentsenan'ny tavy (kanefa raha ny marina dia mandeha miampita). Tsy resaka lojika sy afa-po intsony izy io; ny zava-drehetra eo amin'ny tontolon'ny fampahalalam-baovao, ny politika ary ny tontolo iainana fahatsapana an-tsinay. Mandritra izany fotoana izany dia tsy misy fiantraikany iray ary izany dia tsy maintsy mametraka vola be ao daholo ny tsirairay na tsotra (toa ny mpamboly).
Shell, fantatrao fa ny orinasa izay manana fianakavian'ny fianakavianay manana anjara lehibe (miafina ao ambadiky ny fananganana tsara tarehy rehetra) natomboka tao amin'ny 2009 compound nitrogen izay manampy ny solika. Izay no fanadiovana ny famoahana ireo milina. Raha ny marina, toa ny mifanohitra amin'izany dia toa hiteny isika ary azontsika lazaina fa nampiana ny solika nampidirin'ny orinasa solika ny olana. Ny olana izay tadiavin'ny governemanta Rutte ankehitriny dia ny vahaolana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny hafainganam-pandeha ambony indrindra avy amin'ny 130 ka 100 amin'ny lalamby. André L. Boehman (izay ho bogeyman ankehitriny), profesora ny siansa solika, ny siansa ary ny matihanina any amin'ny Penn State University any New York, dia efa nitatitra tao amin'ny 2009 ao amin'ny New York Times:
Ny solika namboarina Nitrogen dia 'nampiasaina vetivety'. Nambarany fa ny teny hoe "azota azota" dia tsy milaza na inona na inona amin'ny olona antonony izay tsy mahalala ny simia fitrandrahana. Ny zavatra anontaniako ny tenako amin'ny maha-manam-pahaizana solika azy dia: "Fa maninona no nampiditra azota azota kokoa izy ireo, satria amin'ny ankapobeny dia hampitombo ny famoahana ny famoahana NOx?"
Ny fametrahana sôkôla misy otrikaina misy solika no antony. Tsy maintsy ho hita eo ny vahaolana: miaraka amin'ireo mamatsy ny solika; Fantatrao fa vola amina miliara ananan'io fianakaviana io izay mipetraka ao amin'ny lapa sy izay andoavantsika hetra ao amin'ilay hevi-diso antsoina hoe demokrasia. Esory fotsiny ireo menaka azota azota!
Ny fepetra rehetra izay hitantsika izao dia miharihary ny olona manidina manodidina ary mifototra fotsiny amin'ny fahatsapana fampihenan-kevitra nomen'ny manam-pahaizana arahin'i Jeroen Pauw ary fandaharana fahitalavitra hafa momba ny fitantanana fahitana. Tsy misy fitsikerana lalina na fototra siantifika mafy. Ary raha misy fitsikerana, ny sivana no hiantoka fa tsy hahita ny olona ny fahitana azy. Izy io dia momba ny fahatsapana fatatra, fandaharan'asa ambany, ary mpihetsiketsika be karama izay nametraka anao amin'ny volon'ondry miaraka amin'ny sangany. Raha ny hevitro dia mitaky fihodinam-boto amin'ny tany landjepik ny fitakiana azota azon'ireo tantsaha, izay tadiavin'ny fanjakana ho sarotra ho an'ny tantsaha izany. Noho izany sarotra, misy ny banky ary ny mpifanolo-bodirindrina aminy dia afaka maka ny tany ary ny tany sisa dia afaka mankany amin'ny fanjakana amin'ny fananganana foto-drafitrasa. Ny hoe ny fiakaran'ny haingam-pandeha ambony indrindra dia mety hiteraka lavitrisa dolara fanampiny (avy amin'ny lamandy), izay azo anaovana ara-bola ireo fotodrafitrasa vaovao sy fananganana. Ny mahatonga ny tantsaha vitsivitsy hiditra anaty tavoahangy dia hanakorontana ny fanjakana. Ireo mpamboly ireo dia afaka mifanaraka tsara amin'ny maha-mpanompo azy amin'ny mpiara-monina aminy. Tsy ny tontolo iainana akory izany; Momba ny vola sy ny fitsipika bebe kokoa izany (vakio: fifehezana bebe kokoa, ny polisy bebe kokoa). Holandy ho sehatra fitsapana ho an'ny sisa any Eropa sy ny tontolo hafa.
Lees mitohy eto
Lisitry ny rohy loharano: nytimes.com
Ireo mpianatry ny fihetsiketsehan'ny klioban'ny demokrasia dia manaporofo fa ampy
Robert Jensen sy Jensen.nl ny paikady momba ny fandriam-pahalemana momba ny fandriam-pahalemana Infowars ho an'ny Netherlands?
Tags: 100%, 130, fomba, ammoniac, tantsaha, CO2, Featured, indrindra, Anarana iombonana, TSY, fandaharana, hetsi-panoherana, hafainganam-pandeha, lalana, azota
7 Novambra 2019 ao amin'ny 14: 13
"Nirary tsara sy volomparasy ny heath," hoy ireo tantsaha, ka tsy afaka (toa hita fa azota be loatra) izy ireo. Izay milaza fa misy azota be loatra koa. Sa ve izany noho ny asidra ny tany noho ny fananana ammonia be loatra? Ary tsy betsaka ny azota? Fa raha izany koa, ny fampielezana tsy tapaka ny manure dia tsy tsara. Tsy manana dikany ve ianao (na tsy marina io teny azota io)?
7 Novambra 2019 ao amin'ny 14: 23
Ammonia ny tenany dia tsy asidra fa ny fototra; ie manalanitra ny asidra io.
Ny teny azota dia hazavaina ao amin'ilay lahatsoratra ary tsy misy ifandraisany amin'ny voan'ny omby ao amin'ny fandroahana azy ankoatry ny hoe ny atomôma azota dia tafiditra amin'ny amonia. Ammonia dia ilaina ary tsara ho an'ny zavamaniry.
Mazava ho azy fa afaka milaza ianao fa ny zava-drehetra milaza fa 'be loatra' dia tsy tsara, fa ny fandaminana ara-politika dia toa mihodina ny vola sy ny fananan-tany (na esorina), miaraka amin'ireto fepetra takian'ny tontolo ireto ho toy ny alibi
7 Novambra 2019 ao amin'ny 14: 31
Ny tantara dia hoe nanana biby fiompy marobe ny Holandy ary noho izany dia be dia be ny famonoana omby sy ny amonia. Raha mipetraka amin'ny tany izany, ny zavamaniry tia tany maloto - ary tsy mahavita azota be dia be - mijaly amin'izany. Ireo zavamaniry maniry ao anaty tany manan-karena azota, toy ny ahitra sy paloka dia mahazo ny tanana ambony.
Izany no lahateny ofisialy ... mampahatsiahy ilay "hype rain" acid taona vitsivitsy lasa izay. "Zavamaniry tia tany maloto ...", "zavamaniry tandindomin-doza" .. eny eny .. Indray isika mahita ny teny azota azota sy azota! Ny teny azota dia mijanona ho tsy voamarina. Ny nitrogéno dia misy ao anaty sôkôla ihany no misy ao amin'ny sangan'asa.
Hoy aho: fa ny vola dia resaka, fampahalalana bebe kokoa ary ny fanakanana ny tany
7 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 26
Ka ny famakiana ofisialy dia ny amn'ny ammonia dia ratsy ho an'ny zavamaniry sasany amin'ny tahiry voajanahary sasany.
Tsy isalasalana fa tsy dia tsara ny be loatra, fa toa mitovy amin'ny fandringanana ny famonoam-biby any Holandy. Ny tontolo ho toy ny alibi haka vola bebe kokoa amin'ny vahoaka.
Mety ho somary kely ihany izany rehetra izany, saingy toa ny amin'ny fampidirana sy ny habituation amin'ireo rafitra fanaraha-maso tanteraka sy ny vola.
Hitanay ihany koa ny fomba fanta-daza 'ny mpahay siansa izay manohitra ny lahateny ofisialy dia mahazo fampiroboroboana sy ny hafa izay manohana ny tantara mahazo fampiroboroboana' ao amin'ny tantaran'ny CO2. Ny fanontaniana dia hoe izao ve no zava-misy eto.
7 Novambra 2019 ao amin'ny 15: 52
Ny fampiharana ny fampihenana ny famotsorana ammoina dia dingana kely mankany amin'ny fihenan'ny fihinanana hena. Ahoana no andinihanao ny habetsahan'ny hena lanin'ny olona sy ny fihinanana azy? Via 'ny Internet amin'ny zavamananaina' (5G) ary ny fanjifana azo jerena. Izany dia mitaky rafitra vola miorina amin'ny blockchain sy ny zavatra toy ny metatra maranitra ao an-trano (vata fampangatsiahana mba handrefesana izay alehany, trano fidiovana marani-pandrefesana handrefesana izay fivoahana)
Ny alibi "azota" sy ny hype CO2, dia fomba iray tsara tokoa amin'ny fampidirana ny rafitra fitantanana totalitaly.
7 Novambra 2019 ao amin'ny 19: 34
Ary raha tadiavin'ny mpamboly iray avy amin'ny vahaolana, dia hatsahatra amin'ny fomba lojika izany, satria tsy mifanaraka amin'ny fandaharam-potoana 2030 manerantany. Famerana ny fahalalahana ary miditra amin'ny fambolena toy ny andevo ..
7 Novambra 2019 ao amin'ny 20: 04
Vahaolana tsara. Indray mandeha aho dia nanomboka orinasan-tsokajiny tamin'ny zeolite ary voalohany no nitondra izany zavatra izany tany Eoropa tamin'ny toeram-pitrandrahana avy ao Tiorkia sy Australia. Mampalahelo fa amin'ny fotoana iray tsy nisy mpividy be dia tsy nandoa ireo volavolan-dalàna, ka tsy afaka namonjy ilay orinasa aho. Ny tompona vaovao izay nividy azy tamin'ny bankité dia manana ireo lahatsoratra rehetra nosoratako amin'izao fotoana izao ao amin'ny tranokala. Ny mpilatsaka an-tapitrisany no tsara indrindra ankehitriny ary nisaotra ahy tamin'ny asa rehetra tamin'ny antso an-telefaona.
Zeolite, ary indrindra ny Clinoptilolite, dia mametraka amonia amin'ny rano maloto ary azo averina indray amin'ny alàlan'ny fandroana sira. Ny Clinoptilolite izay nomeko dia efa neken'ny EU ihany koa ho fisakafoanana mahavelona. Izaho no voalohany nanatitra izany tany amin'ny toeram-piompiana soavaly sy tranon'ny akoho (misy haingam-pandeha).
Vahaolana hafa izay miasa. Saingy ny olona dia tsy mila vahaolana, te-hanapaka ny indostria izy ireo ary hahazo vahana tsara kokoa.
7 Novambra 2019 ao amin'ny 23: 07
Martin ny fanazavanao izay manazava be dia be, ny zava-drehetra ao Madurodam sy ny manodidina dia miovaova amin'ny famonoana luciana.
7 Novambra 2019 ao amin'ny 21: 14
Marihina koa fa nanomboka ny "fanjakany azota" avy amin'ny filankevitry ny fanjakana.
Ny club izay Willen-Alexander no lehiben'ny.
Mazava avy eo fa avy aiza ny olana.
8 Novambra 2019 ao amin'ny 12: 17
Ny zavatra rehetra, indrindra ireo zavatra manan-danja ho an'ny zazalahy amin'ny script, dia ampitaina amin'ny fahalavorariana. Noho izany dia tsy misy dikany ny handehanany any amin'ny fitsarana.
Tsy azoko hoe tsy miara-miasa ny tantsaha, ny tontolon'ny fananganana sns. Ny loza dia mijanona fa ny fikambanana izay maniry zavatra lalina, lalina, dia voan'ny trandraka marobe. Firenena inona. Soa ihany fa miaina 'lalànan'ny lalàna' isika.
7 Novambra 2019 ao amin'ny 23: 31
Ary ny gazety fampielezankevitra lehibe indrindra any Holandy dia mety manomboka manomboka manara-maso ny fanaraha-maso ny fahavoazana izao, efa miharihary izao (satria ny fandrefesana dia fahalalana, data be) izay tsy entin'ny vahoaka.
(maimaimpoana vakiana amin'ny fomba Incognito, fa tsara kokoa raha tsy mahita izany tsy misy dikany)
Ny olona dia mbola miresaka momba ny azota, fa tsy resaka azota. Izany no anarana fampielezan-kevitra, hanome ny fahatsapana fa mihomehy ianao!
17 Novambra 2019 ao amin'ny 14: 05
« Philippe Schol, mpisolovava, dia nitifitra ny tatitra momba ny fanonganana an'i Schiphol
Ahoana no ahafahanao manery ny governemanta hiova nefa tsy miraharaha ireo vahoaka? »
Total visits: 14.053.963
Mind Supply op Nicky Verstappen Jos Brech dia momba ny fanekena angon-drakitra ADN noho ny fiarahana amin'ny ADN amin'ny Internet
Martin Vrijland op Nicky Verstappen Jos Brech dia momba ny fanekena angon-drakitra ADN noho ny fiarahana amin'ny ADN amin'ny Internet
ZalmInBlik op Nicky Verstappen Jos Brech dia momba ny fanekena angon-drakitra ADN noho ny fiarahana amin'ny ADN amin'ny Internet
Mifandraisa anjara amin'ny 1.685 hafa